Yini kwekhanda esikoleni ngoba izinwele naphakathi kungenziwa?
Njalo umama ufuna indodakazi yakhe enhle kunazo. Esikhathini esiningi amantombazane ukuchitha esikoleni. Ngakho, izinwele kufanele ungayixotshi amahle kuphela kodwa futhi ngokucophelela ngakho ungagxambukeli inqubo yemfundo. Hairstyle akufanele edabukisayo emini, kanye nokuqaliswa kwalo ngokuvamile isikhathi esincane, ngoba izimali wengane ekuseni abazali abaningi baphendukela nenkinga. Ngakho iziphi alungise izinwele yesikole for izinwele naphakathi kungenziwa?
Uma intombazane enezinwele ezimfishane, isikhathi ecwaninga phandle kancane kakhulu. A kanjani ukuba umzali, uma indodakazi yami nezinwele obuphelele naphakathi? On the okubi esikoleni ungahambi - ke lingcolile siyingcuba futhi singcolile, futhi bayohlala ukugxambukela izifundo zabo. A kwamagoda elula eziningi kakade bored. Ngakho-ke, omama abaningi banesithakazelo umbuzo yini engenziwa yesikole zezinwele izinwele ophansi.
Ideal for amantombazane babo bonke ubudala - a ezilulazayo namathe. Izinhlobo zezinwele eziningi. Ungakwazi eluka eluka evamile ukuhlobisa it ne kuze kudabuke umhlane noma izikhonkwane, eyolanda ubhasikidi noma ubutha uhlevane. Kodwa ungakwazi abeke izinwele spikelet noma indlela "Fishtail". Ungakwazi eluka pigtails ezimbili noma eziningi, khona-ke waqoqa ngendlela Bun, gcina ukwelukwa bacondze etindzaweni letehlukene, kuhlangene pigtails, kuze kudabuke umhlane kanye hairpins. Kukhona izixazululo eziningi, konke kuncike emcabangweni wakho. Zezinwele for izinwele aphakathi esikoleni, ehlanganisa ezinweleni - kuyindlela engcono komama abafuna indodakazi yabo wabheka enhle, ihlanzekile futhi nsuku zonke ngendlela entsha.
Kodwa ngokuvamile kwenzeka ukuthi ekuseni awunaso isikhathi ukuba sifake kwamagoda. Yini lapho cishe zezinwele okusheshayo esikoleni? Indlela elula ukwenza umsila. Ungakwazi umane abuthele izinwele zakho zibe Bun noma ezimbili ukwakha Ponytail, ungenza omunye ngohlangothi lwakho noma phezulu. Uma nezinwele ezimfishane okwesikhathi stowage, imicu ehlangeni kungaba pin noma nge-lacquer. A okufana lokhu kwekhanda ukuhlukana kwabo uhlangothi futhi isitayela izinwele lo msila, omunye ngaleyo Uma kwenzeka uya ku ugongolo.
Hlobisa zezinwele kwansuku yesikole kungaba ezihlukahlukene nge bands zenjoloba elikhanyayo, kuze kudabuke umhlane kanye hairpins. Kubukeka isitayela limnandi ifomu anezikhala. Kulokhu, wena sebuningini imicu mncane kusukela ebunzini lakhe abuthele bands zenjoloba mncane noma ukugconwa "izinkalankala." Khona-ke ungakwazi ngibashiye ngandlela behlangene.
Kodwa lezi ongakhetha akulungile ngoba umfundi wasesikoleni esiphakeme, futhi amantombazane iminyaka 10-11 bayanqikaza ukugqoka gum egqamile futhi pigtails. Yini kwekhanda esikoleni ngoba izinwele naphakathi batusa kulesi simo?
Kamnandi uyobheka eluka okuxekethile laying umsila shaggy, ihlukaniswe izinyanda, noma ugongolo. Uma nje imicu okuyisisekelo ambalwa ohlangothini ngalunye - lokhu futhi ngeke sigqoka. Ungase futhi eluka kwamagoda ezimbili mncane kusukela amathempeli ngesimo usebe, kokushiya lonke izinwele okuxekethile. Imfashini muva nje kuye kwaba ukwenza kwekhanda ngesiGreki. Nge intombazane esafunda esikoleni ngeke libukeke, engavamile futhi ngesikhathi esifanayo ngokucophelela.
Nomaphi lapho wena ukhethe kwekhanda esikoleni, inqobo nje intombazane ukhululekile nalo. Kufanele kube yokuthi awusebenzi ezicezile yokufunda singcolile ngokushesha, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi isikole abasebasha. Futhi-ke, amantombazane izinwele kufanele, dala ngendlela ethile futhi ahluke.
Kare Buzov: isithombe kanye nezinzuzo ukugunda izinwele
Ukunqunywa izinwele ezinhle ubude obuphakathi kwezinwele ezikhazimulayo
Amashampu futhi izinwele isimo Okuhle
"The Healing Power Of Love": nabalingisi we ifilimu
Iqhaza abadlali, "Kuyinto Ngohlobo a Funny Indaba." indaba
Honeydew - umthombo uju esihlwabusayo futhi unempilo
Izicima umlilo zomlilo i-Carbon dioxide ziyindlela ephumelelayo yokucima
Indatshana phezu ifilimu Rylova "In Blue Space": Amathiphu Ukubhala
Ukunemba futhi uhla ukufakwa umlilo "Grad". Volley "Grad": engaba ekubhujisweni, TTX, amagobolondo
"Lezinkumbi": Thriller esikisela ucansi abadlali yasekhaya
Imidiyeni ezinzwa yomuntu: incazelo ukwakheka komzimba womuntu kanye nezici kwesakhiwo. Izimpawu Izinzwa lesemkhatsini